> Resource > Beddelaan > Sida loo Encode AVI Faylal ay la AVI Encoder
Dad badan ayaa doonaya in ay encode kale video files si avi faylasha loogu isticmaalo ballaaran. Waxaa laga yaabaa in ay doonayaan in ay daawato videos on qalabka qaar ka mid ah way adag tahay sida iPhone, iPod, Apple TV, PSP, Madaxweyne Siilaanyo 360, PS3, iRiver, Creative kamidka ah, Archos iyo in ka badan. Mise waxay jeclaan lahayd in aad is geliso videos si ay u PPT ah, ama wax ka bedel videos in Windows Kan sameeyey Movie iwm Si kastaba ha ahaatee, ku videos ay leedahay ma buuxin karaan baahida loo qabo sababta oo ah incompatibility. Sidaa darteed, waxaa loo baahan yahay si xun encoder ah AVI wax ku ool ah si loo xaliyo dhibaatada. Tusaale ahaan, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) karti uu u leeyahay in encode AVI ka qaab video dhow wax tayo aad u sarreeya.
Wondershare Encoder AVI aan kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan AVI files ka kale video files oo keliya, laakiin sidoo kale waxay kuu ogolaanaysaa inaad encode AVI in qaabab kale. Sidoo kale, waxaa si toos ah u taageertaa qalabka caan ah oo kala duwan. Haddii ujeedada Deji files AVI waxaa kaliya u arkaysid on qaar ka mid ah qalabka ama tafatirka ee software qaar ka mid ah, waxaad samayn kartaa isticmaalka buuxa ee presets this app ee qalabka caanka ah sida qalabka Apple (iPhone, iPad, iPod, Apple TV) iyo boqolaal ka mid ah qalabka Andriod , iyo sidoo kale qaar ka mid ah barnaamijyadooda video tafatir oo caan ah. Kuwani presets si toos ah-filaayo in gabi ahaanba ka dhigi doonaa videos ugu wanaagsan ee aad u baahan tihiin.
Hoos waxaa ku qoran, Waxaan idin tusin doonaa sida loo isticmaalo this encoder AVI dareen in encode aad videos in avi videos for isticmaalka. Hagaha tallaabo-tallaabo waa mid aad u sahlan.
1 videos Add to encoder AVI ah
Fur gal meesha files deegaanka ay ku kaydsan yihiin computer ka dibna dooro videos aad rabto in aad encode. Ka dib markii in, si toos ah jiidi & hoos u faylasha loo doortay in ay leeg- bidix. Waxaa muuqata sawirka hoose. Haddii kale, markaad Gashaan interface default this app ee, si fudud riix badhanka xitaa galka on your computer ka dibna dajiyaan videos aad rabto in aad encode.
2 Dooro AVI sida qaab wax soo saarka
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay doortaan AVI qaab saarka suuqa kala AVI encoder ee. Si aad u furato suuqa kala qaab ah, waxaa jira labo siyaabood oo kala duwan. In guddi Qaabka Output ee interface hadda, midkood guji liiska hoos-hoos qaab ama ku dhacay image qaabka. Marka aad u samayn, tag "Qaabka" tab> ah "Video" category> ah "AVI" doorasho.
Haddii aad rabto in ay doortaan qalabka qaar ka mid ah, tag "Device" tab halkii. Markaas, doorato qalabka aad dooneyso. Ogsoonow in riix badhanka hoos-fallaadha xulashada qaybood, waxaad ka heli kartaa fursado qalab dheeraad ah.
3 files Encode AVI
Tag geeska midig ugu hooseysa interface ah iyo riix "Beddelaan" button waxaa si ay u bilaabaan Deji files AVI. Kolkiiba, waxaad ka arki kartaa dhamaystirka boqolkiiba shaqada dhabta ah ee video kasta horyaalka. Ha u ordo ee asalka ah ama aan. Waxaa jiri doona qoraal ah oo leh hawlaha oo dhan ayaa la dhameysatay ka dib markii habka Deji ah. Markaas, dhufatey "Open Folder" badhanka hoose ee interface si aad u ogaato wax soo saarka .avi files. Hadda, kaliya raaxaysan files wax soo saarka.
Sida loo Encode MPEG Faylal ay la MPEG Encoder
Sida loo Encode Files MP4 la Encoder MP4
Sida loo Beddelaan MOV in wmv fudayd ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)